Posted by သက်တန့်ချို at 8:53 PM
So this is Myanmar...
( aja aja....fighting!!)
မိုးနတ်ကြယ်စင် January 24, 2013 at 9:31 PM
kyalphyulau January 25, 2013 at 12:34 AM
I read this post bro!!!!!!
ခံစားနေရတဲ့နာတာရှည်ရောဂါကို ဆေးဖိုးမတတ်နိုင်လို့ မသေနိုင်သေးပါဘူးလေဆိုပြီး အန္တရာယ်ရှိမှန်း ဒုက္ခပေးနေမှန်း သိသိကြီးနဲ့ မကုဘဲနေရတဲ့ လူနာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီစာဖတ်ပြီး သက်ပြင်းချသွားပါတယ်။
SHWE ZIN U January 25, 2013 at 6:00 AM
ဒီလို့ပိုစ့် မျိုးကို ရေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ
ဆရာ သက်တန့်ချိုပြောတာတွေ တော်တော်များများမှန်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ဦးဟာ ဆရာဝန်လေးဘ၀ကနေ အထူးကု ဆရာ ၀န်ကြီးတစ်ဦး ဖြစ်လာဖို့အတွက်ရင်းခဲ့ရတဲ့အချိန်တွေ၊ ငွေတွေ၊
ပေးဆပ်မှုတွေ အများကြီးပါ။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံတော်က တရားဝင်
ပေးအပ်ထားတဲ့ဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ လစာကို ဆရာပိုသိမှာပါ။ အစိုးရဆေးရုံတွေရဲ့ ပံ့ပိုးမှုနဲ့ ကျန်းမာရေးဘက်ဂျက်ကိုလည်း ဆရာ ပိုသိမယ်ထင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ကကျန်းမာရေးနဲ့
ပတ်သက်ပြီး ပံ့ပိုးပေးတဲ့နေရာမှာ အများကြီးလိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေသေးတယ်။ ကိုယ့်စရိတ်ကိုယ်စားပြီး ရွှေထွက်နေကြတဲ့ (အိတ်ထဲကရွှေ) တိုက်နယ်၊မြို့နယ်ဆရာဝန်တွေ အများကြီး ရှိပါတယ်ဆရာ။ ဒီဆောင်းပါးဟာ လုပ်စားနေသော ဆရာ ၀န်ကြီးတွေကို ရည်ရွယ်ပြီး ရေးတာဆိုပေမယ့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်သွားမယ်ထင်ပါတယ်။ နဂိုကတည်းကမှ ဆရာဝန်တွေကို အမြင်စောင်းနေတဲ့ မီဒီယာများ နဲ့ မျှမျှတတ သမာသမတ်ကျကျ တွေးခေါ်တတ်ခြင်းမရှိတဲ့လူတစ်ချို့ က ဆေးလောကကို ၀ါးလုံးရှည်နဲ့သိမ်းရမ်းဖူးတာ ဆရာသိမှာပါ။ ဒါကြောင့် ဒီဆောင်းပါးဟာ သမာသမတ်ကျပြီး တကယ့်စေတနာဆရာဝန်တွေကို ပြည်သူလူထုက အထင်လွဲစရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ တွေးမိတာလေးကို ဆွေးနွေး ကြည့်တာပါ။
သက်တန့်ချို January 25, 2013 at 11:03 AM
Doctor-Patients Relationship ဆိုတာ တချို့သော ဆရာဝန်ကြီးများရဲ့ Ethic နဲ့မညီတဲ့လုပ်ရပ်ကို သိသိသာသာရော မသိမသာရော ဖုံးကွယ်ကာကွယ်ပေးချင်ကြတဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တချို့နဲ့ ဆရာဝန်အချို့ ၊ ဆေးကုမ္ပဏီ အသိုင်းအ၀ိုင်းအချို့ကြောင့်ယခုလိုပျက်ပြားနေရခြင်းဖြစ်တယ် ။
ဆရာဝန်တွေအားလုံး အရှိကို အရှိအတိုင်းလက်ခံကြဖို့လိုပါပြီ ။ မှန်ပါတယ် ကျွန်တော်နာမည်တပ်မပြောပါဘူး ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ Privacy ကိုလေးစားလို့ဖြစ်တယ် ။ ဘယ်ဆရာဝန်ကြီးမို့ မပြောရဲလို့ဆိုတာလည်းမရှိဘူး ။ ကျွန်တော်ဘယ်သူတွေကိုရည်ညွှန်းနေလဲဆိုတာ သိတဲ့သူတွေအသိဆုံးဖြစ်ကြပါလိမ့်မယ် ။
Symposium တွေမှာ Pharma company တွေက Distribution လုပ်တယ်ဆိုတာလက်ခံပါတယ် ။ ကျွန်တော်လည်းရေးထားပါတယ် ဒါပေမယ့် အဲဒီပိုက်ဆံတွေအားလုံးရဲ့ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းကိုတော့ မီဒီယာတွေကနေတဆင့်ပြည်သူတွေကို အသိပေးတယ်လို့တော့တစ်ခါမှမကြားမိပါဘူး ။
အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းလက်မခံနိုင်သရွေ့ ကျွန်တော်တို့ဟာ အမှားတွေထဲကနေ ဘယ်တော့မှ ရုန်းထွက်လို့မရနိုင်ဘူး ။ ၅၀ တန်ဆေးနဲ့ ၅ ကျပ်တန်ဆေးက အရည်အသွေးကွာတယ်လို့တချို့ပြောကြတယ် ။ မငြင်းလိုပါဘူး ။ ဒါပေမယ့်သိထားစေချင်တာက FDA ကရော line တွေကို ထိထိရောက်ရောက် တားဆီးနိုင်ပြီလား ဆိုတဲ့မေးခွန်းပါပဲ ။ ပြည်သူတွေအားကိုးနေရတာ ၅၀ တန်ဆေးမဟုတ်ပါဘူး ၅ ကျပ်တန် ဆေးတွေပါ ဒါဆို ဘာလို့ ဆေးဝါးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးဈေးနှုန်းမညှိပေးနိုင်ရသလဲဆိုတဲ့အချက်ကစဉ်းစားစရာပါ ။ ကြော်ငြာခတွေနဲ့ ဒီလို Distribution fees တွေက ဆေးဝါးတွေရဲ့ဈေးနှုန်းတွေအပေါ်တင်ထားကြတယ်ဆိုတာကိုတော့ ဆရာဝန်များအားလုံးနားလည်ကြမယ်ထင်ပါတယ် ။ မလိုအပ်ပဲ Multivitamin တွေပေးနေတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေရောမရှိဘူးလားလို့ ကြိမ်းသေပါသလား ။ ပြောရရင်အများကြီးရှိပါသေးတယ် ။ ကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းနေရသလိုပါပဲ ။
“ ဆေးကုမ္ပဏီများက Marketing program အရ အကျိုးလို၍ ညောင်ရေသွန်းနေကြခြင်းဖြစ်သည် ” ( လက်ခံပါသလား )
“ တချို့ဆရာဝန်ကြီးများက ထို Ethic နှင့်မညီသော အရာများထဲတွင်နစ်မွန်းနေကြသည် ။ Deal လုပ်နေကြသည် ။ ” ( လက်ခံပါသလား )
“ Refer Fees တွေယူကြတာ Ethic နှင့်မညီပါ ” ( လက်ခံပါသလား )
“ Chemical Name ပဲညွှန်သင့်သည် ဟု ယူဆသည် ။ ဆေးဝါးအရည်အသွေးကို စီစစ်ရန်မှာ FDA ၏ တာဝန်ဖြစ်သည် ။ အပေါစားအရည်အသွေးမမှီသော ဆေးဝါးများကို တားဆီးရန်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဆေးဝါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်၏ တာဝန်ဖြစ်သည် ” (လက်ခံပါသလား )
“ ဆရာဝန်ကြီးတွေ ကျေးဇူးရှိသည် ဆရာများဖြစ်ကြသည်ကို ကျွန်တော် လေးနက်စွာလက်ခံပါသည် ။ သို့သော် . . Doctor-Patients Relationship ဆိုသောစကားကို လေးနက်စွာ ပြန်စဉ်းစားစေလိုသည် ။ မကောင်းသောအရာကို ကာကွယ်ပေးခြင်းသည် တဖြည်းဖြည်းအရိုးထဲထိလှိုက်စားလာသော အနာနှင့်တူသည် ။ ပိုးဝင်ပြည်တည်အဆင့်ထိ ကျွန်တော်မရောက်စေလိုသော စေတနာနှင့်ရေးခြင်းဖြစ်သည်ကို နားလည်သူတိုင်းနားလည်ကြသည် ။ ” (လက်ခံပါသလား )
(ကျွန်တော်ရေးတဲ့ဆောင်းပါးက တချို့ကို တည့်တည့်ထိတယ် ဒီတော့မခံနိုင်လို့ပြန်ရေးကြတာနားလည်ပါတယ် ။ ဆရာဝန်စိတ်ဓါတ်အပြည့်ရှိသော Ethic အပြည့်ရှိသော ဆရာဝန်များကို မရည်ညွှန်းမှန်း စာဖတ်သူတိုင်းနားလည်ကြမည်ထင်သည် )
အခုလိုတင်ပြတာ အလွန်ဝမ်းသာပါသည်။ ဒီထက်မက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသိပေးနိုင်လျှင်ပိုကောင်းပါသည်။ ဆရာစိတ်ဝင်စားလျှင် IFPMA website ကို ၀င်ကြည့်ပါက Medical Promotion and Advertising နှင့်ပတ်သက်၍ Code of Conduct များ ရှိပါသည်။ အခြားသူများကိုလည်း Share ပေးပါ၊ ဆရာဝန် အသိမိတ်ဆွေများကိုလည်း Share ပေးစေလိုပါသည်။ ၄င်းသည် Ethics နှင့်သာမကပဲ bribery and corruption ပါ ကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ဆက်သွယ်လိုပါက- medjai31@yahoo.com ကို mail ပို့နိုင်ပါသည်။
တတိယမြောက်သမီးတော် January 25, 2013 at 12:14 PM
သမီးတော် လွန်ခဲ့တဲ့ (၁၀)နှစ်က လည်ပင်းက အဆီကျိတ်
ကိုခွဲတာ တခြားဆရာဝန်တွေနဲ့ ပြပေမယ့် သိတ် အဆင်မပြေဘူးဆိုပြီး
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း သီပေါမြို့ နယ် ခွဲ က နမ့်လန် မြို့တိုက်နယ်
ဆေးရုံလေးမှာခွဲခဲ့ပါတယ် ဒေါက်တာ ရွှေညာဏ် လို့ ခေါ်တဲ့ ဆရာဝန်က
သိတ် ကိုစေတနာ ကောင်းတဲ့ဆရာဝန်ပါ ရှမ်းလူမျိုးတွေဆိုရင်
ဘုရားစင်မှာတောင် တင်ပြီး ဘုရားလို ကိုးကွယ်ချင်ပါတယ်လို့ 
ပြောရလောက်အောင် တော်လဲတော်ပြီး စေတနာ ကောင်းတဲ့သူပါ
ကျမ လည်ပင်းခွဲတာ တစ်သောင်းပဲ ကုန်ခဲ့ပါတယ်
အဲ့ဒီ အချိန်က အနည်းဆုံး ငါးသောင်းလောက် ခွဲစိတ်ခ ယူတဲ့အချိန်
လို့ပြောလို့ ရမယ် တခြားဆရာဝန်တွေနဲ့ တိုင်ပင် ခဲ့ လို့ ပါ
ကျမ ကံကောင်းတယ်လို့ ပြောရမလိုပါပဲ သိတ်တော်ပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့
စေတနာကောင်းတဲ့ဆရာဝန် မျိုး နဲ့ ဆုံခဲ့ ကုသ ခဲ့ရလို့ ပါပဲ
အသိပညာ အားနည်း တဲ့ ကျမ တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေ အနေ နဲ့
ဒေါက်တာ ရေးထားတဲ့စာကို ဖတ်မိကြရင်သိတ်ကောင်းမှာပဲလို့ 
တွေးရုံမှ တပါး ပဲ ရှင်
Hi, Saya thet tant,
Thank very much for this post. Also I would like to know about the liver disease, especially how to prevent infection of B and C infection .
အတ္တ January 26, 2013 at 3:56 PM
အတ္တ January 26, 2013 at 4:03 PM
အားမလျော့နဲ့ .... ဖိုက်တင်း....
Nge Naing January 26, 2013 at 4:56 PM
သက်တန့်ချိုရေ သိပ်ကောင်းတဲ့ ဆောင်းပါးတပုဒ်ပါ။ မိတ်ဆွေ ဘလော့ဂါတွေထဲက ဆရာဝန်တယောက်က ဒီလို အများပြည်သူတွေဘက်က ရပ်တည်ပြီး ရဲရဲဝံ့ဝံ့ မှန်မှန်ကန်ကန် ထောက်ပြပေးတာ ဖတ်လိုက်ရတော့ တကယ်ကိုဝမ်းသာပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို Public Health in Myanmar မှာ မတွေ့ရသေးလို့ အဲဒီမှာ တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။
အောင် January 27, 2013 at 8:43 PM
အောင် January 27, 2013 at 8:47 PM
အနာသိ၇င် ဆေး၇ှိပါတယ်..။ အခုအနာတော့တွေ့ပြီ ဘယ်သူတွေကဆေးထည့်ပေးကြမှာလဲ ...ခင်ဗျာ.......။
Moe Thida January 29, 2013 at 9:12 AM
Moe Thida January 29, 2013 at 9:13 AM
Shinny Summer February 8, 2013 at 4:49 PM
Anonymous March 29, 2016 at 9:45 PM
ဆရာ ကျ​နော်​ အ​မေက လည်​ပင်​မှာ အဆီကျတ်​ဖြစ်​​နေတာပါ အဲ့ဒါ ​​လော​လောဆယ်​မှာ ခွဲစိတ်​ဖို့ အခက်​အခဲဖြစ်​လို့  မခွဲစိတ်​ရ​သေးပါဘူး ကြာသွားရင်​
ဘာဖြစ်​နိုင်​ပါသလဲခဗျ ​နောက်​ပြီ ဘယ်​မှာ ခွဲစိတ်​ရင်